Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo lakulmay boqorka wadanka Sucuudi Careebiya. – Radio Daljir
Luulyo 4, 2016 1:07 b 0
(July 04 2016)-Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke ayaa booqasho ku tagay magaalada barakeysan ee Maka,halka oo u kulan kula qaatay boqorka dalka Sacuudiga ,boqor Salmaan bin Cabdulcasiis.
Wada-hadal dhex-maray ra’iisul wasaaraha iyo boqorka,waxaa lugu soo qaaday xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal.
Waxaa kalo ay isla meel dhigeen inta uu socday kulanka boqorka iyo ra’iisul wasaare Sharma’arke,in ay lagama maarmaan tahay Soomaaliya iyo Sacuudigu inay xoojiyaan, aragtidooda ku aaddan danahoda gaarka ah iyo kuwa guud ahaaneedba.
Ra’iisal wasaaraha ayaa sidoo kale magaalada Maka kula kulmay, taliyaha ciidammada gaarka ah ee Xaramka, jeneraal Maxamed Al-Axmadi.
Ujeeddada socdaalka ra’iisal wasaare Sharma’arke uu ku tagey Sacuudiga ayaa waxaa qayb ka ah, in uu ku soo cumraysto halkaas.
Booqashadan waxaa kalo ra’iisul wasaaraha ku waheliya,wasiirka Qorsheynta xukuumadda Soomaaliya iyo mas’uuliyin kale oo ka tirsan xukuumadda dalka.